Soomaaliya oo jeedisay in wadahadal lagu xaliyo khilaafaadka u dhaxeeya Wadamada Carabta - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo jeedisay in wadahadal lagu xaliyo khilaafaadka u dhaxeeya Wadamada Carabta
June 7, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Calanka Soomaaliya. [Sawirka: Puntland Mirror]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa ugu yeertay Wadamada Carabta in ay khilaafkooda ku xaliyaan iyada oo loo marayo wadahadal, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada.
“Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo xubin ka ah Ururka Jaamcadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamku waxey diyaar u tahay in ay gacan ka geeysato sidii xal loogu heli lahaa khilaafkan Diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay waddamada walaalaha ah.” Ayaa lagu yiri bayaanka.
Horaantii todobaadkan, Sucuudi Caraabiya, Masar, Baxrayn, Isutaga Imaaraatka Carabta iyo Yemen ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jaray Qatar, iyaga oo ku eedeeyay in ay taageerto ururo argagixiso oo ka jira gobolka, balse Qatar waa ay diiday eedaymahaas.
June 23, 2017 Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya: Anagu dhex-dhexaad baanu ka nahay khilaafka u dhaxeeya dowladdaha Khaliijka